China Stunning Modern Garden Statues orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | Piedra
Sarivongana maoderina mahavariana
Modely Tsia: MOS61
Amin'izao fotoana izao dia mihamalaza ny fahatongavan'ny sarivongana maoderina ankehitriny. Namboarina tamin'ny endriny serfa izy io, ary manintona be toy ny haingon-trano. Izahay dia nanao sary sokitra nandritra ny 13 taona mahery izay misy ekipa matihanina (mpanao sary sokitra efa za-draharaha, mpamolavola 3D matihanina, varotra mahay mahay) mba hifandrindra tsara aminay. Aza misalasala mifandray aminay raha tianao ny endrika eto.
Anaran'ny vokatra Haingon-trano firavaka vy lehibe
Laharana modely MOS61
Type Sary sokitra vy
farany Voalamina ny fitaratra
Fampiasana Fanamboarana zaridaina / famolavolana Yard
Technique Welding, Nikosokosoka
Style Sary sokitra maoderina maoderina
Fepetra fandoavana T / T na Western Union
fanamarihana Ekena ny OEM
PIEDRA (XIAMEN) SCULPTURE CO., LTD. dia mpanamboatra asa tanana sokitra vy sy varahina manam-pahaizana amin'ny famolavolana endrika, sary sokitra ary fanariana fahaiza-manao na fahaiza-manao voarindra ao Xiamen, Sina. Rehefa afaka 13 taona mahery ny fampandrosoana, ny orinasa dia manana refy lehibe, izay manana endrika matanjaka, ekipa varotra, serivisy sy ny fahaiza-manao fabrication.
Ireto misy FAQ vitsivitsy izay afaka manampy anao hahalala bebe kokoa ny orinasantsika ary sary sokitra mahafinaritra.
2. Inona ny vokatra lafiny afaka mamokatra ve ianao?
Manana ny ozininay sary sokitra sy sary sokitra izahay, izay manana traikefa manan-danja amin'ny famoronana sary sokitra. Ny endriny rehetra, ny refy, ny tany dia azo karakaraina. Tsy ho an'ny sary sokitra kely fotsiny amin'ny 1m ny haavony, fa ho an'ny sary sokitra lehibe ihany koa ny halavany 10m, ny habe rehetra dia mora ho anay. Na dia amin'ny sary sokitra goavambe aza dia azonao antoka ny momba ny fandefasana. Azontsika atao ny manao sary sokitra amin'ny sehatra maromaro hifanaraka amin'ny fitoeran-javatra.
Previous: Sarivongana lehibe an-kalamanjana ho an'ny trano onenana
Manaraka: Sary sokitra ivelany ho an'ny fampirantiana
Sarivongana volamena tsy azo asiana volamena ...
Sary sokitra ivelan'ny mody ivelany ivelany vita tamin'ny metaly S ...
8m habe maoderina lehibe ivelany sary sokitra anatiny ...
Sary sokitra metaly ivelany ho an'ny loharano
Zavakantoana Abstract sary sokitra abstract ...